ခြင်္သေ့မျိုးစိတ် ၈ ခု အကြောင်း - Thutazone
ခြင်္သေ့မျိုးစိတ် ၈ ခု အကြောင်း
တောဘုရင်တွေလို့ လူသိများထင်ရှားတဲ့ခြင်္သေ့တွေဟာ ကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြပြီး Panthera genus မျိုးစိတ်တွင်းပါဝင်နေပါတယ်။ ကြောင်ကြီးမျိုးစိတ်ဝင်တွေအနက် ကျားသတ္တဝါတွေပြီးရင်တော့ ခြင်္သေ့တွေဟာ ဒုတိယအကောင်အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်မှာတော့ အိန္ဒိယနဲ့ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ ဆာဟာရဒေသတွင်းမှာပဲ အများဆုံးတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။
(၂၀၁၇)ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတော့ ခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေကို အာရှ နဲ့ အာဖရိကခြင်္သေ့အဖြစ် အဓိကအားဖြင့်ခွဲခြမ်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ ခြင်္သေ့တွေကို P.I.leo နဲ့ P.I melanochaita ဆိုပြီး အဓိက မျိုးစိတ်ကြီး(၂)ခုအဖြစ် ခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲဒီမျိုးစိတ်ကြီး ၂ခုကနေမှ ဘာဘရီခြင်္သေ့ ၊ မာဆိုင်းခြင်္သေ့ ၊ အီသီယိုးပီးယားခြင်္သေ့ ၊ အာရှခြင်္သေ့ စသည်ဖြင့် ခြင်္သေ့အမျိုးအစားတွေကို ထပ်ခွဲပါသေးပါတယ်။
ကြောင်ကြီးမျိုးစိတ်တွေအနက်မှာတော့ ခြင်္သေ့တွေဟာ အလွန်ကိုသန်မာကြပြီး ခြင်္သေ့အမများစွာ၊ သားပေါက်များစွာနဲ့ စုစုစည်းစည်း နေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ခြင်္သေ့တွေဟာ ဆာဗားနားမြတ်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးတွေမှာ နေထိုင်ရတာကိုနှစ်သက်လေ့ရှိပြီး ချုံနဲ့ သစ်တောဒေသတွေမှာလည်းတွေ့မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ မွေးမြူထားတဲ့ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ပျမ်းမျှ သက်တမ်းဟာနှစ်(၂၀) ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေမယ့် တောရိုင်းနယ်မြေထဲမှာတော့ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဟာ (၁၀)နှစ်ကနေ (၁၄)နှစ်အတွင်းသာ ရှင်သန်လေ့ ရှိကြပါ။ ဒီတခါတော့ ကမ္ဘာပေါ်က ကွဲပြားတဲ့ခြင်္သေ့မျိုးနွယ်စိတ်တွေကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်။
(၈) ဘာဘရီခြင်္သေ့ (P.I.leo)
မြောက်အာဖရိက ခြင်္သေ့မျိုးနွယ်တွေလို့လူသိများထင်ရှားတဲ့ ဘာဘရီ Barbary ခြင်္သေ့တွေဟာ အီဂျစ်၊ တူနီးရှား၊ မော်ရိုကိုနဲ့ အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ ယခင်ကာလများစွာက ပေါများစွာ ကျက်စားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ ဘာဘရီခြင်္သေ့တွေကို မျိုးတုံး သွားခဲ့ပြီလို့ သတ်မှတ်ထားကြပြီး ဘာဘရီခြသေ့င်္တကောင်ကို နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရတာကေတာ့ (၁၉၂၀)ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တူနီးရှားနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး မုဆိုးတွေရဲ့အမဲလိုက် သုတ်သင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ကတော့ Rabat တိရစ္ဆာန်ရုံမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ခြင်္သေအုပ်စုတွေအနက်မှာ ဘာဘရီခြင်္သေ့မျိုးနွယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ ခြင်္သေ့တွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဘာဘရီခြင်္သေ့ တွေဟာကမ္ဘာပေါ်က ခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေအနက်မှာတော့ အရွယ်အစား အလွန်ကိုကြီးမားကြကာ ဘာဘရီခြင်္သေ့ အထီးတစ်ကောင်ဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် အလျား ၁၀ပေ ကနေ ၁၁ပေ ဝန်းကျင် အထိရှည်လျားလေ့ရှိကာ အလေးချိန်အားဖြင့် (၂၀၀)ကီလိုဂရမ်လောက် အထိကိုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဘာဘရီခြင်္သေ့ကို မြောက်အာဖရိကခြင်္သေ့ ၊ အီဂျစ်ခြင်္သေ့ ၊ ဘာဘာခြင်္သေ့ စသည်ဖြင့်လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။
(၇) အနောက် အာဖရိကခြင်္သေ့ (P.I. Leo)
ဒီခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေကတော့ မျိုးတုံးဖို့ အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ အနောက်အာဖရိက ခြင်္သေ့မျိုးနွယ်စိတ်တွေကိုတော့ အာဖရိကအနောက်ဘက်ပိုင်းကနေ အလယ်ပိုင်းတလျှောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ ဆီနီဂေါသမ္မတနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေဒေသအတွင်းမှာ အများအားဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အနောက်အာဖရိကခြင်္သေ့မျိုးနွယ်တွေဟာဆိုရင် ဆာဟာရကန္တာရ ခြင်္သေ့မျိုးအုပ်စုတွေအနက်မှာတော့ အလွန်သေးငယ် တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ကြပြီး အနောက်အာဖရိကတိုက် ဒေသတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့ ကောင်ရေ ၂၅၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၆) အနောက်တောင် အာဖရိကခြင်္သေ့ (P.I. melanochaita)
ယင်းမျိုးစိတ်တွေကိုတော့ Katanga ခြင်္သေ့တွေလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပြီး အာဖရိကတိုက် အနောက်တောင်ဘက်ခြမ်းမှာပါဝင်နေတဲ့ အန်ဂိုလာ၊ ဇာအာရီ၊ အနောက် ဇမ်ဘီးယားနဲ့ဇင်ဘာဘွေ၊ နမ်ဘီးယားနဲ့ ဘော့ဝါနာမြောက်ဘက်စွန်းပိုင်းဒေသတွေမှာ အများအားဖြင့်မြင်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီး အာဖရိကအနောက်တောင်ပိုင်းခြင်္သေ့မျိုးစိတ် အထီးတစ်ကောင်ဟာဆိုရင် (၈.၂)ပေကနေ (၁၀.၂)ပေအထိ အရွယ်အစားရှိပြီး အမတွေကတော့ (၇)ပေခွဲကနေ (၈)ပေ(၇)လက်မအထိ အတိုင်းအတာရှိကြပါတယ်။
အထီးတစ်ကောင်ရဲ့အလေးချိန်ဆိုရင်လည်း ကီလို ဂရမ်(၁၄၀) ကနေ(၂၄၂)အထိအလေးချိန်စီးပြီး အမတွေကတော့ (၁၀၅)ကီလိုဂရမ်ကနေ(၁၇၀)ကီလိုဂရမ်အထိအလေးချိန်စီးပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ကာတန်ဂါခြင်္သေ့တွေရဲ့ လည်ဆံမွှေးအရောင်ဟာ အခြားသောခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေရဲ့ လည်ဆံမွှေး အရောင်ထက် ပိုမိုဖျော့တဲ့အရောင်ရှိပါတယ်။ ဒီခြင်္သေ့တွေဟာ သဲကန္တာရ ၊ မြက်ခင်းပြင် ၊ သစ်တော ၊ တောင်တန်းဒေသ စတဲ့နေရာမျိုးစုံမှာ ကျက်စားနေထိုင်ကြပါတယ်။
(၅) မာဆိုင်းခြင်္သေ့ (P.I. melanochaita)
အာဖရိကအရှေ့ခြင်္သေ့ လို့လည်းခေါ်တဲ့ မာဆိုင်း Masai ခြင်္သေ့တွေကိုတော့ အရှေ့အာဖရိကမှာပါဝင်နေတဲ့ကင်ညာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊မိုဇမ်ဘီးယား၊တန်ဇမ်းနီးယားနိုင်ငံတွေမှာ အများဆုံးမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယင်းခြင်္သေ့တွေရဲ့နောက်ပိုင်းဟာ အခြားသောမျိုးစိတ်တွေထက် အနည်းငယ်ကွေးပြီး ခြေတံတွေဟာလည်း ပိုမိုရှည်လျားပါတယ်။ မာဆိုင်းခြင်္သေ့ထီးတွေရဲ့ ခြေဒူးဆစ်နားတွေမှာတော့ အမွှေးအမျှင်တွေပါရှိတတ်ပြီး လည်ဆံမွှေးတွေဟာဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းကို ဘီးနဲ့လှန်ဖီးထားသလို ရှိနေတတ်ကာ အသက်အရွယ်ရလေလေ လည်ဆည်မွှေးပိုမိုထူထဲတတ်ကြပါသေးတယ်။
မာဆိုင်းခြင်္သေ့ကြီးအများစုဟာ မြေနိမ့်လွင်ပြင်တွေထက် အမြင့်ပေ (၂၆၀၀)လောက်မြင့်တဲ့ ကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာ အနေများပါတယ်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် မာဆိုင်းခြင်္သေ့ထီးတစ်ကောင်ဟာ (၈.၂) ပေကနေ (၉.၈)ပေအထိရှည်လျားပြီး ခြင်္သေ့မတွေကတော့ (၇.၅)ပေကနေ (၈.၅)အထိရှိကြကာ ပျမ်းမျှအလေးချိန်အားဖြင့် ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်ကနေ ၂၀၀ ကီလိုဂရမ် ဝန်းကျင်အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။
(၄) ထရန်ဗားလ်ခြင်္သေ့ (P.I. melanochaita)
အာဖရိကတိုက် အရှေ့တောင်ပိုင်းခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေကိုတော့ ခါလာဟာရီ Kalahari (သို့) ထရန်ဗားလ် Transvaal ခြင်္သေ့ တွေကိုတော့ အာဖရိကတိုက်တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ခရူဂျာအမျိုးသားဥယျာဉ်နဲ့ ဆွာဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ လာအနီအမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းမှာ အရေအတွက်အတော်များများတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းခြင်္သေ့မျိုးစိတ်အများစုဟာဆိုရင် အနက်ရောင်ရှိကြပြီး ထူထဲတဲ့ လည်ဆံမွှေးတွေပိုင်ဆိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
အထီးတစ်ကောင်ဟာ (၈)ပေခွဲ ကနေ (၁၀)ပေခွဲအထိအရှည်ရှိပြီး အမတွေကတော့ (၇.၇)ပေကနေ (၉)ပေလောက်အထိကြီးထွားကြပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် ခါလာဟာရီခြင်္သေ့ထီးတစ်ကောင်ဟာ ကီလိုဂရမ်(၁၅၀) ကနေ (၂၅၀)ကြား၊ အမတွေကတော့ ကီလိုဂရမ် (၁၁၀) ကနေ (၁၈၂) အလေးချိန်လောက်အထိကိုရှိတတ်ကြပါတယ်။
(၃) အီသီယိုးပီးယားခြင်္သေ့ (P.I. melanochaita)
အီသီယိုးပီးယား Ethiopian ခြင်္သေ့တွေကိုတော့ အဘိုင်စီနီယန် Abyssinian (သို့) အက်ဒစ် အဘာဘာ Addis Ababa ခြင်္သေ့တွေဆိုပြီးလည်း လူသိများကြပြီး မူလက အရှေ့အာဖရိကခြင်္သေ့မျိုးနွယ်အုပ်စုမှာထည့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်တွေမှာတော့ အီသီယိုးပီးယားခြင်္သေ့ တွေဟာ မျိုးနွယ်ကွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလာရပါတယ်။ အခြားသောခြင်္သေ့မျိုးနွယ်တွေနဲ့ယှဉ်မယ်ဆိုရင် သေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မည်းနက်တဲ့လည်ဆည်မွှေးများရှိကြပါတယ်။
(၂) ကိတ်ပ်ခြင်္သေ့ ( P.I. melanochaita)
ကိတ်ပ်ခြင်္သေ့တွေဟာ ဟိုတချိန်ကတော့ တောင်အာဖရိကရဲ့ Natal နဲ့ Cape ပြည်နယ်တွေမှာ ရှင်သန်ကျက်စားခဲ့ဖူးပြီး ယနေ့အချိန်မှာတော့ မျိုးတုံးသွားတဲ့ ခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ကိတ်ပ်ခြင်္သေ့တွေရဲ့ နားရွက်စွန်းဟာ အနက်ရောင်ရှိကာ အမည်းရောင်လည်ဆံမွှေးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ခြင်္သေ့မျိုးစိတ်တွေထဲမှာ အရွယ်အစားအားဖြင့် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ကာ ခြင်္သေ့ထီးတကောင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလျား ၁၁ပေ ဝန်းကျင်အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကောင်ရေအနည်းငယ်တွေ့ခဲ့ရပြီး အဲဒီထဲက ၂ကောင်ကို အာဖရိကကို ယူဆောင်မွေးမြူခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မျိုးတုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အာရှခြင်္သေ့ (P.I. leo)
Asiatic ခြင်္သေ့ တွေကိုတော့ အိန္ဒိယခြင်္သေ့တွေအဖြစ်သာ လူသိများပြီး ဟိုးတချိန်ကတော့ တူရကီနိုင်ငံကနေ အနောက်တောင်အာရှဒေသတစ်လျှောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အထိဒေသတစ်လွှားမှာအများဆုံးနေထိုင်ကျက်စားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ အိန္ဒိယခြင်္သေ့တွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်အတွင်းက Gir အမျိုးသားဥယျာဉ်နယ်မြေအတွင်းမှာပဲ တွေ့ရပါတော့တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အကောင်အရေအတွက်အားဖြင့်တော့ ၂၀၁၇ခုနှစ်စာရင်းများအရ ၆၅၀ခန့် ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီခြင်္သေ့တွေဟာ အာဖရိကတိုက်က အကြီးဆုံးသောခြင်္သေ့မျိုးနွယ်တွေထက်တော့ သေးငယ်ကာ အလယ်အာဖရိကတိုက် ခြင်္သေ့တွေနဲ့တော့ရွယ်တူလောက်ရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး အိန္ဒိယခြေင်္သေ့တစ်ကောင်ဟာ အလေးချိန်အားဖြင့် (၁၆၀)ကီလိုဂရမ်ကနေ(၁၉၀)အကြား၊ အမတစ်ကောင်ဟာ ကီလိုဂရမ်(၁၁၀)ကနေ(၁၂၀)ကြားအထိအလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။ အိန္ဒိယခြင်္သေ့တွေဟာအာဖရိကခြင်္သေ့တွေနဲ့လည်ဆံမွှေးပုံစံကွဲပြားပြီး သူတို့ရဲ့နားတွေကိုအမွှေးအမျှင်ဖုံးအုပ်ထားတာမျိုးမရှိကြပါဘူး။ အာဖရိကခြင်္သေ့တွေလိုပဲ အာရှခြင်္သေ့တွေဟာ အဖော်အပေါင်းနဲ့ စုဖွဲ့နေတတ်ပါတယ်။ ခြင်္သ့အထီးတစ်ကောင်ဟာ ခြင်္သေ့အမ ၅ကောင်ခန့်အထိနဲ့ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။